Imvume kunye nokudityaniswa kunye ne-TI-84 Plus
Ngu-Jeff McCalla, C. C. Edwards
Unokusebenza kwiimvume kunye nokudibanisa kwi-TI-84 Plus yokubala. A imvume, ichazwe ngu i-NPR , uphendula umbuzo: Ukusuka kuseto lwe n izinto ezahlukeneyo, zingaphi iindlela onokukhetha ngazo kwaye oda (lungiselela) r yezi zinto? Inye into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba ucwangco lubalulekile xa usebenza neemvume.
Imibuzo yemvume inokubuza imibuzo enje, Zingaphi iindlela iimbaleki ezinokuphela zikwimedali yeOlimpiki (iGolide, iSilivere, okanye iBronze)? Ngaba ucwangco lubalulekile? Ewe; sebenzisa i-NPR nge n = 10 kwaye r = 3 Ifom ye-permutation yile: I-nPr = (n!) / (nr)!
Zithini iziyobisi ze-lcd
UKUYA indibaniselwano, ichazwe ngu NCr , uphendula umbuzo: Ukusuka kuseto lwe n izinto ezahlukeneyo, zingaphi iindlela onokukhetha kuzo (ezizimeleyo okanye iodolo) r yezi zinto? Umyalelo awubalulekanga ngokudityaniswa.
Imibuzo yokudibanisa inokubonakala ngathi, Ikomitana encinci eyenziwe ngabantu aba-4 kufuneka ikhethwe kwiqela labangama-20. Ngaba ucwangco lubalulekile? Hayi; izikhundla ezihlanu zekomiti zinamandla alinganayo. Sebenzisa NCr nge n = 20 kwaye r = 4 . Ifomula yokudibanisa yile: NCr = (n!) / (r! (ng-r)!) .
Endaweni yokuchwetheza kwifomula ngalo lonke ixesha, kufanele ukuba (kuninzi) kube lula ukusebenzisa imvume kunye nokudityaniswa kwemiyalelo. Ukuvavanya imvume okanye indibaniselwano, landela la manyathelo:
Zimbini iindlela zokufikelela kwiitemplate ze-nPr kunye ne-nCr: Cinezela
ukufikelela kwimenyu yeMATH PROB okanye cinezela [ALPHA] [WINDOW] ukufikelela kwimenyu emfutshane.
Kwi-TI-84 Plus, cinezela
ukufikelela kwimenyu enokubakho apho uya kufumana khona imvume kunye nokudityaniswa kwemiyalelo. Usebenzisa i-TI-84 Plus, kufuneka ungene n , faka lo myalelo, emva koko ungene r .
Jonga imenyu yePROB kwiscreen sokuqala. Jonga imenyu emfutshane kwiscreen sesibini. Cinezela inombolo kwimenyu ehambelana netemplate ofuna ukuyifaka.
Kwindawo yokuqala engenanto, ngenisa n, inani lilonke lezinto ezisetiweyo.
indlela yokulala nentlungu yomsila
Ngenye indlela, ungangena n kuqala emva koko ufake itemplate.
Cinezela iqhosha elitsolo lasekunene ukuhamba isikhombisi sakho kwindawo yesibini engenanto kwitemplate.
Faka r, inani lezinto ezikhethiweyo kuseto, kwaye ucinezele [ENTER] ukubonisa iziphumo.
Bona isikrini sokugqibela. Qaphela oku kungenanto i-NPR template kumgca wokugqibela kwesikrini sokugqibela.
ziphi indawo zomzimba wakho
amayeza wamehlo e-aleji
linden tea intliziyo umonakalo
amayeza e-asidi amayeza e-reflux
indlela yokuncamathisela kwiLaptop